Nolavin’i Hong Kong ny visa an’ireo tonian-dahatsoratry Financial Times izay nanatontosa valan-dresaky ny mpomba ny fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 9:59 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, 繁體中文, English
Ity lahatsoratra ity dia famintinana ny tatitra nivoaka tamin'ny 5-6 Oktobra 2018 tao amin'ny Hong Kong Free Press (HKFP). Mifototra amin'ny fifanaraham-piaraha-miasa ny famoahana azy indray.
Hong Kong dia fari-pitantanana manokana ao Shina izay manana fahalalahana ara-toekarena sy manokana kokoa noho ny tanibe, natsangana araka ny foto-kevitra “Firenena Iray, Rafitra Roa.” Tato anatin'ny taona vitsy dia nanery an'i Hong Kong mba hankatoa lalàna vaovao manamafy ny ” Firenena Iray” ho ampahany amin'ny fitsipika i Beijing.
Nitarika lahateny nataon'ilay mpikatroka mpanohana ny fahaleovan-tena, Andy Chan ao amin'ny FCC tamin'ny volana Aogositra i Mallet, izay noezahan'ny biraon'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny ao Hong Kong nosakanana.